Abasebenzi base-US abazobamba iqhaza bashiya ubumbano edolobheni laseChina phakathi kwengxabano - izingxoxo zethelevishini
Izisebenzi eziyimbuso yaseMelika zashiya umphathi wazo edolobheni laseChina iChengdu ngemuva kokuphela kwamahora angama-72.
I-China iyalele ukuvala phansi ukuphendula ukuvala yi-United States evela kuMmeli waseChina oseHouston, eTexas, ngeledlule.
Ngaphambi komnqamulajuqu wangoMsombuluko, abasebenzi babonwa bephuma kuleli bhilidi, kwasuswa ifulegi kwabe sekuhliswa ifulegi laseMelika.
UMnyango Wezangaphandle waseChina uthe abasebenzi baseChina bangene kuleli bhilidi ngemuva komnqamulajuqu futhi "bathatha izintambo."
Umkhulumeli woMnyango Wezwe LaseMelika uthe, "Lo mgadli ubesemhlanganweni wobudlelwano nabantu basentshonalanga neChina, kubandakanya neTibet, iminyaka engu-35.
“Sidumele ngesinqumo seqembu lamaKhomanisi amaShayina futhi sizolwela ukuqhubeka nokwazisa abantu bakulesi sifunda ngokusebenzisa ezinye izikhala zethu eChina. "
Ngenkathi kuvala i-US Consadors, izakhamizi zakule ndawo zahlangana ngaphandle, zinezindawo eziningi ezifulege zaseChina futhi zithatha ama-selfies.
Inhloli yaseChina eyayizingela ku-LinkedIn
NgoLwesithathu olwedlule, i-United States iyalele ukuvalwa kwalowo mbuso waseChina eHouston, nokusolwa ukuthi sekuyindawo yokugcwala kanye nokwebiwa kwempahla.
Ukungezwani kuqinisile phakathi kwala mazwe womabili ngenxa yezinkinga eziningi:
Ukuphathwa kukaMongameli wase-US uDonald Trump sekuxabene kaningi eBeijing mayelana nokuhweba kanye nobhubhane lwe-coronavirus
UWashington ubuye wagxeka ukwenziwa kweChina komthetho omusha wokuphepha ophikisayo eHong Kong
Ngesonto eledlule, IS Singaporean ivuma icala enkantolo yase-US ngokusebenza njenge-ejenti yeChina
Futhi ngeviki eledlule, abantu abane baseChina bagwetshwa ecaleni elihlukile lokukhwabanisa lama-visa aseMelika ngezinsolo zokuqamba amanga ngenkonzo yabo ebuthweni lezempi laseChina.
legendAbasebenzi baqale ukukhipha lo mbhalo wamakhompiyutha kwinxusa laseMelika ngeSonto
Imithombo yezindaba yaseChinese iveze izithombe zamaloli ashiya abasebenza nabasebenzi besusa amabheji ezakhiwo.
NgoMsombuluko ekuseni umsakazi wesifundazwe uCCTV uthumele i-video yokususwa kwefulegi laseMelika.
Amaphoyisa amaningi aseChina athunyelwa ngaphandle kwesakhiwo, enxusa ababukeli ukuthi baqhubekele phambili.
Kodwa-ke, ama-boos azwakala ngesikhathi ibhasi elinamafasitela amancane liginqikile ukuphuma kuleli bhilidi ngeSonto, kusho abezindaba ze-AFP.
Ngesikhathi izazimameli zaseChina zishiya umsebenzi wazo eHouston ngeledlule, zahlekiswa ngababhikishi.
Kungani iChina yakhetha ukuvala inxusa laseMelika eChengdu?
Ngesonto eledlule, iHhovisi Lezangaphandle lathi ukuvala umlomo "kungukuphendula okusemthethweni nokudingakalayo" kwizinyathelo ezithathwe yiMelika.
Abasebenzi abasebenza kuleli khaya "babandakanyeka emisebenzini engaphezu kwamandla abo, bangenelela ezindabeni zangaphakathi zaseChina futhi babeka engcupheni ezokuphepha kanye nezintshisekelo zabo eChina," kusho isitatimende.
I-Chengdu Consadors, eyasungulwa ngo-1985, yayimelela izintshisekelo zaseMelika endaweni enkulu eningizimu nentshonalanga yeChina.
Ummeli wabhekwa njengento ebaluleke kakhulu ngoba inike amandla iMelika ukuqoqa imininingwane ngeTibet, lapho bekube nengcindezi yesikhathi eside yenkululeko. Amaqembu amalungelo kudala asola iChina ngokucindezelwa kwenkolo kanye nokuhlukumeza amalungelo abantu eTibet, okuphikiswa yiBeijing.
legendAmaphoyisa agada izakhiwo zezibukeli
Iningi labasebenzi abangaphezulu kuka-200 bezisebenzi zomlozi eziqashiwe lapho.
Ukuvalwa kushiya iMelika ine-Consulates amane ezwenikazi laseChina kanye nenxusa enhlokodolobha iBeijing. Iphinde ibe nenxusa e-Hong Kong.
Kwenzekeni eHouston ngesonto eledlule?
I-China ilahlekelwe ngumsebenzi wayo eHouston ngesonto eledlule, kodwa isenabanye abantu abane eMelika kanye nenxusa eWashington DC.
Ngemuva komnqamulajuqu wamahora angama-72 wokuthi izazimameli zaseChina zishiya ihhovisi laseHouston ngoLwesihlanu ziphelelwe yisikhathi, izintatheli zabona amadoda abonakala njengeziphathimandla zaseMelika ephoqa umnyango engena emagcekeni.
Isihloko semidiyaAmadoda asebenzisa i-hose futhi avale amathini kadoti kuChristian Consadors eHouston
UNobhala Wezwe waseMelika uMike Pompeo uthe iWashington yenza ngoba iBeijing "yeba" impahla yobuhlakani.
Lowo okhulumela uMnyango Wezangaphandle eChinese uWang Wenbin uphendule wathi isinqumo seMelika sisekelwa "enkambisweni yamanga alwa neChina."
Ukulungiswa: Le ndatshana yaqala yafaka imephu eyayingalungile futhi yathathelwa indawo.